सनसनीपूर्ण शिर्षक दिदैँ ब्लग सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि प्रयोग भएका छन् : सौगात गौतम - MeroReport
सनसनीपूर्ण शिर्षक दिदैँ ब्लग सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि प्रयोग भएका छन् : सौगात गौतम
राजनिती शास्त्रमा स्नाकोत्तर सौगात गौतम एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छन् । सन् २०१० देखी रोट्रयाक क्लबमा आबद्ध सौगात नेतृत्व विकास प्रशिक्षक पनि हुन् । क्रिकेट र फुटबल खेल्न रुचि राख्ने सौगातलाई ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै रुचि छ । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै सौगात गौतमसँग कुराकनी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
युवाहरुको सानो प्रयास र सहभागिताले समाजमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने साधारण नेपाली युवा भनेर चिनाउन चाहान्छु ।
हामीले आफ्नै वेबसाइट बनाउन सक्छौ भन्ने मैले कतै सुने र ब्लगस्पटमा ब्लग बनाए तर म खासै सक्रिय ब्लगर भने थिईन । म विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत सामाजिक तथा राजनैतिक सवालमा आफ्ना विचारहरु ब्यक्त गर्थे । पछि साथिहरुले ब्लग लेख्न सुझाव दिए पछि म ब्लग मै सक्रिय हुन थाले । अहिले भने मैले वर्डप्रेस मार्फत आफ्ना कुराहरु ब्यक्त गर्न थालेको छु ।
म खास गरि समयसापेक्ष सामाजिक र राजनितीक विषयमा लेख्ने गर्छु । तर ठ्याक्कै यही विषयवस्तु भन्ने चाहिँ छैन । जुन कुरामा लेख्न सक्छु र लेख्नु पर्छ भन्ने लाग्छ, लेख्ने गर्छु ।
तपाईले https://gautamsaugat.wordpress.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनुहुन्छ ?
केही साथिहरु मिलेर भ्वाईस ईन क्राईसिस नामक ब्लग चलाउने योजनामा छौँ । जसमा अहिलेको राजनितिक अवस्थाले गर्दा नेपालीहरुले अहिले सामना गर्नु परिरहेको संकट बारेका कुराहरु हुनेछन् ।
तपाई त विभिन्न संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, निकै ब्यस्त रहनुहुन्छ होला, कसरी समय मिलाउनुहुन्छ ब्लगिङलाई ?
ब्लग कै लागि भनेर समय चाहिँ छुट्याउदिन । फुर्सदको समयमा मात्र लेख्ने गर्छु ।
कम्प्यूटरको साधारण प्रयोग गर्न जान्ने जस्ले नि ब्लग चलाउन सक्छ ।
मेरो ब्लग पढ्ने साथिहरुले रचनात्मक सुझाव दिदैँ अझै लेख्न हौसला दिनुहुन्छ ।
मलाई भ्रमण, स्वयंसेवा तथा अनुसन्धानमा रुचि छ ।
रुचि कै विषय समेट्ने कोशिश गरेको छु ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका क‘नै रमाइला घटना वा प्रसंग भए बताइ दिनुहोस न ।
अहिलेसम्म त त्यस्तो कुनै घटना भएको छैन् ।
हो, ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता हो । यसमा प्रत्येक साधारण मानिसले आफ्ना विचार ब्यक्त गर्न पाउँछन् । यद्यपी सनसनीपूर्ण शिर्षक दिदैँ ब्लग सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि प्रयोग भने भएका छन् ।